NextMping | Online Quiz
Ramangwana reBasa Quiz
Remangwana rebasa rasvika zvino wagadzirira? Isu pano paNextMping ™ tinotarisisa zvinhu zvese zvinouya nekukubatsira kuti usvike ipapo.
Kuuya kune ramangwana kunoreva kufunga kwakasiyana-siyana kuchinjika kubva pamutsetse kuenda kune dzakawanda maonero.
Inguva yekufungazve ramangwana uye kugadzira zvigadzirwa kuti usvike ipapo. Tora iyi inokurumidza quiz kuti uone kuti uripi pamugwagwa wekuenda kune ramangwana. Nekuti nzira yakanakisa yekukwikwidza mune ramangwana ndeyekugadzira iyo!
Iko kambani yako iri pamucheto unotungamira we tekinoroji kusanganisa kungava kwegore kutama kubva kuhurongwa hwegumbo kana kugona kwegore kuwedzera bhizinesi agility
Tarira: Iyo yekumberi tarisiro ndeyegore optimization inosanganisira kuvandudza kuchengetedzeka, akawanda makore matambi mhinduro, mushandisi optimization yevatengi uye kuwedzera kwevashandi mukana wekusimudza gore
Iwe unayo pfungwa, maitiro uye maitiro ari munzvimbo kuti uve ramangwana rebasa rakagadzirira?
Ongorora: Kuti ugadzire ramangwana rakawanda unoda mubatanidzwa wevanhu vakatarisana nekufunga sevateedzeri, mahumanists, technologists uye vagadziri venzvimbo (tsime: SingularityU)
Wakaboka here chikamu chitsva chekufunga kwakadzama, zviwanikwa uye tsigiro inodikanwa kuti ufambise nguva yemberi?
Ongorora: Chii chatatiwanira pano hachizotisvitsa ikoko (Marshall Goldsmith)
Iwe uri kushandura nzira iyo vatungamiriri vanofunga nezveramangwana rebhizinesi kubva kumusoro kumusoro?
Ongorora: Kuvhiringidza maitiro matsva anogona kukuvadza kana usiri iye ari kukanganisa (Clay Christensen)
Iwe une here mapangwa ekuronga zano reizvo zvinotevera iwe nekambani yako?
Ongorora: Chekutanga danho ndechekuti uone kuti chimwe chinhu chingaitika chingangoitika (Elon Musk)
Kana wapindura HAPANA kune chero yeiyi mibvunzo iyi mukana wekuva nhaurirano nesu nezve InoteveraMepu ramangwana rako.
Ndokumbirawo kuti utibate kuti utange foni inoenderana kuti utaure nezvako uye ramangwana rako michelle@nextmapping.com.